dimanche, 01 mai 2016 14:48
Tahiri-tsary Sobika Mandritsara
Pont Viêtnam - Mandritsara : Tsy afaka miteny ilay vehivavy nisy nanipy tao anaty fotaka
Avotra ny ainy saingy tsy afaka miteny. Mbola manaraka fitsaboaka ao amin’ny klinika tsy miankina ao Mandritsara ilay vehivavy iray hita tao anaty fotaka, nifatotra tongotra aman-tanana, tao amin’ny toerana antsoina hoe Pont Viêtnam Antsahabe, Kaominina ambonivohitra Mandritsara, faritra Sofia ny harivan’ny zoma 27 aprily lasa teo. Tanana no ahetsiketsiny hilazany izay tiany hambara.
dimanche, 01 mai 2016 14:46
Sary Sobika Maintirano
Maintirano : Vono olona mahatsiravina
Tovolahy mpivarotra mangidy iray hita faty nihoson-drà tao an-tranony ny harivan’ny zoma teo, tao Maorodoka Maintirano. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ilay tovolahy. Tanora vao herotrerony, manodidina ny 19 taona, ity namoy ny ainy ity. Voalaza fa tso-piaina, tsy manana olana ara-piarahamonina izy. Tsy hita ny nahavanin-doza. Misokatra ny fahadihadiana hikarohana ny marina manodidina ity vono olona mahatsiravina ity. (Tandremo sary manohina ny fo)
dimanche, 01 mai 2016 10:05
Manohy miasa ihany ny Fifiabe
Na dia nisy aza fanapahan-kevitra entitra noraisin'ny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny zandarimaria ny tsy fahazoan'ny koperativa Fifiabe miasa ao anatin'ny 10 andro vokatry ny loza nitranga, dia tazana io maraina io ihany aloha ny fiara fa miasa hatrany. Tsy mazava amin'ny maro tokoa manko ny hoe, ny hafa no manao ny ataony ka ny rehetra no voasazy, eny hatramin'ny mpandeha izay terena andeha tongotra ? Misy aza moa no milaza ny mponina hoe, alefaso aty aminay ny kamion'ny Emmoreg hitatitra anay eny Alarobia amonjena 1er mai fa efa lalany ihany eny.
dimanche, 01 mai 2016 09:11
Sakoroka eny Ambohipo
Hatramin'ny omaly hariva ary nitohy io maraina io ny fitokonan'ny andian'olona eny Ambohipo. Hatreto dia voalaza fa nisy tanora nosamborin'ny Emmoreg nefa lavin'ny olona eny.
Pepite d'or Ambohimanarina
samedi, 30 avril 2016 16:36
Lozam-pifamoivoizana tetsy Mahitsy
Ankizy mpianatra miisa enina no maty tamin'ny loza izay nitranga teny Mahitsy omaly, mpianatra eny ao amin'ny sekoly Pepite d'or eny Ambodivonkely Ambohimanarina moa ireto ankizy niaran-doza ireto, manodidina ny eo amin'ny valo sy sivy taona eo izy ireo, efa tonga nitsapa alahelo eny amin'ny toerana misy azy avy ny minisitry ny fitanterana.
vendredi, 29 avril 2016 23:39
Sary Sobika Antsohihy
Antsohihy: Mahafaly Olivier naka tso-drano
Tonga tany Antsohihy androany ny lehiben'ny governemanta Olivier Mahafaly naka tso-drano tany amin'ny faritra nihaviany tany Sofia. Omby 20 moa no voalaza fa hatao sorona amin'izany. Somary gaga ihany ny mpanara-baovao fa ny Solombavambahoaka lany tany Bealanana ihany no niatrika izany ankoatr'ireo mpitondra HVM tany antoerana. Ry Jao Jean izay anisan'ireo nanatitra ny anarana hatao praiminisitra teny Iavoloha dia tsy tazana teny, efa mampiseho sahady ny mety hitranga amin'ny fivoriana ara-potoanan'ny Antenimieram-pirenena ve izao araky ny feo mandeha fa tezitra mafy amin'ity Praiminisitra ity ireo Solombavambahoakaa satria dia tsy nisy noraisiny ireo anarana natolotr'izy ireo nokasaina hatao minisitra?
Fankalazana ny 85 taonan'ny RNM
vendredi, 29 avril 2016 22:02
Nanakalazaina izao alina izao teto Anosy ny tsingerintaona faha 85 nijoroan'ny RNM na ny Radio Nasionaly Malagasy. Tonga nanotrona tao avokoa ireo tale maro misahana ny tontolon'ny serasera ka notarihin'ny Minisitry ny serasera Vonison Andrianjato. Anisan'ny nanamarika ity lanonana ity moa ny famintinana, izay natao mivantana ireo karazana fandaharana misy eto amin'ny radio Madagasikara.
vendredi, 29 avril 2016 21:59
Taxibe nande mafy niaran-doza teny amin'ny digue Andohotapenaka. Tafakatra 8 ny maty
Tsy fifehezana ny fisongonana sy fandehanana mafy no niteraka ny loza tetsy amin'ny digue Andohotapenaka teo tamin'ny 4 sy sasany maraina. 3 no maty tsy tra-drano ary io hariva io dia tafakatra 8 ny isan'ireo namoy ny ainy raha ny tatitry ny hopitaly HJRA. Mbola maro ireo miady amin'ny fahafatesana amin'izao.
vendredi, 29 avril 2016 20:31
Lozam-piarakodia teny Mahitsy. 8 no maty, 25 maratra
Nitrangana lozam-piarakodia namoizana ain'olona 8 tetsy Mahitsy izao hariva izao. Nivarina tany anaty antsana ny fiara nitondra ireto mpianatra avy nitsangatsangana. Mpianatra 7 ao amin'ny Pépite d'or Ambohimanarina kilasy madinika ny amin'ireo namoy aina. Miisa 25 ireo naratra mafy nihazo ny hopitaly. Sprinter, nandeha mafy, ny fiara nitondra ireto zaza mbola kilasy 10eme ireto rehefa avy nitsangatsangana avy any Andranovelona.
jeudi, 28 avril 2016 15:40
Photo: Illustration Net
Lalam-pirenena 44 : Taksibrosy voatora-bato, mpandeha telo naratra
Teo anelanelan'Andaingo sy Amboasary no niseho ny asan-jiolahy. Fiara taksibrosy roa, Sprinter sy Mazda, mampitohy an’Antananarivo amin’Ambatondrazaka no voatora-bato. Olona telo no naratra voan'ny vakina fitaratra. Ilay fiara sprinter no tena nitondra faisana. Miantso fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana ireo kaoperativa mampiasa ny lalam-pirenena faha-44.
Page 450 sur 501